बाढीका कारण तराईमा सर्पदंशको बिगबिगी, एक सातामा २ को मुत्यु, २६३ अस्पतालमा – Health Post Nepal
२०७६ साउन ६ गते १४:३१
असारको अन्तिम सातादेखि भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरो र त्यसले निम्त्याएको डुबानको असर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले भोगिरहेका छन् । दुई साताको अवधिमा डुबानमा परेका तराईका जिल्लाहरूमा पानीजन्य रोगको संक्रमण बढ्नुका साथै सर्पदंशको बिगबिगी बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक सातामा सर्पको टोकाइका कारण २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ सय ६३ जना अस्पताल पुगेका छन् ।
डुबानमा परेलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा पानीजन्य रोगहरूको संक्रमणसँगै सर्पको बिगबिगी फैलने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताइसकेका थिए । डुबानमा परेलगत्तै हेल्थपोस्टनेपालले प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंशको बिगबिगी हुन सक्ने खतरा औँल्याउँदै बच्ने उपायबारे चेतनामूलक समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । डुबानमा परेका क्षेत्रमा सर्प बस्ने जमिनमुनिको भागमा पानी जमेपछि सर्पहरू बाहिर निस्कने भएका कारण सर्पको टोकाइको जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सोमबार बिहान सूचना जारी गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाले बाढी–पहिरोको जोखिम बढाएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । यस अवधिमा महामारीको अवस्था नरहे पनि अधिकांश ठाउँमा झाडापखाला, ज्वरो तथा सर्पदंर्शका बिरामी बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपत्कालीन तथा विपद्व्यवस्थापन एकाइ (एचइओसी)का प्रमुख चूडामणि भण्डारीले जानकारी दिए ।
एक सातामा सर्पले २ को ज्यान लियो, २ सय ६३ लाई अस्पताल पुर्यायो
पछिल्लो एक सातामा मात्रै तराईका ५ अस्पतालमा सर्पको टोकाइका कारण उपचार गर्न आउनेको संख्या २ सय ६३ पुगेको छ भने २ जनाको मृत्यु भएको आपत्कालीन तथा विपद्व्यवस्थापन एकाइले जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म बाढी–पहिरोका कारण ९० जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने अझै २९ जना बेपता छन् । ४३ जना घाइतेकोे उपचार भइरहेको छ । एचइओसीले दिएको तथ्यांकअनुसार २७ असारदेखि २ साउनसम्म गौर अस्पताल रौतहट, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, सगरमाथा अस्पताल सप्तरी, जनकपुर अस्पताल, कलैया अस्पताल बारामा सर्पको टोकाइपछि २ सय ६३ जना उपचार गराउन पुगेका छन् ।
गौर अस्पताल रौतहट
सर्पको टोकाइपछि ४६ जना बिरामी गौर अस्पताल पुगेका छन्, जसमध्ये ३ जनालाई विषालु र ४३ जनालाई सामान्य सर्पले डसेको छ । एकजनाको भने मुत्यु भएको छ ।
कलैया अस्पताल बारा
कलैया अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सर्पको टोकाइका बिरामीको संख्या ३६ पुगेको छ । यसमध्ये ६ जनालाई विषालु सर्पले तथा ३० जनालाई कम विषयुक्त सर्पले टोकेको बताइएको छ ।
नारायाणी अस्पतालमा सर्पले डसेका कारण ९८ जना बिरामी उपचारका लागि आएका छन् । उनीहरूमध्ये एकजनालाई विषालु तथा ९७ जनालाई कम विषालु सर्पले टोकेको पाइएको छ ।
सगरमाथा अस्पतालमा ४१ जना सर्पको टोकाइका कारण उपचारका लागि पुगेका छन्, जसमध्ये २ जनालाई विषालु सर्पले तथा ३९ जनालाई कम विषालु सर्पले टोकेको बताइएको छ ।
सर्पले टोकेका ४२ जना बिरामी जनकपुर अस्पताल पुगेका छन्, जसमध्ये ३ जनालाई विषालु तथा ३९ जनालाई कम विषालुसर्पले टोकेको पाइएको छ । एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
सर्पको टोकाइपछि लागाइने भ्याक्सिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश २ लाई १ हजार १ सय एन्टिस्नेक भेनम पठाएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयमातहातबाट ७ वटा जिल्लालाई १–१ सय र सिराहामा २ सयवटा भ्याक्सिन वितरण गरेको र अन्य २ सय भ्याक्सिन बाँकी रहेको (एचइओसी)ले जानकारी दिएको छ ।
बाढीका कारण पानीजन्य रोगहरू टाइफाइड, जन्डिसको संक्रमणको जोखिम : डा. पुन
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा दूषित पानीका कारण पानीजन्य रोगहरूको संक्रमणको सम्भावना बढ्ने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा.शेरबहादुर पुन बताउँछन् । संक्रमणबाट बच्न पानी उमालेर पिउनुपर्ने सुझाब उनको छ । डा. पुनले भने, ‘पानीजन्य रोगका कारण टाइफाइड तथा जन्डिसको संक्रमण बढी हुने गर्छ । यस्ता रोगबाट बच्चपानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
बाढी कारण झाडापखाला, आउँ, हैजा, टाइफाइड, जिन्डिस, फुड प्वाइजनिङलगायत रोग फैलिन सक्ने खतरा रहेको डा. पुनको भनाइ छ । ‘यस्तो वेलामा सरुवारोगको जाखिम उच्च हुने गर्छ र कीटजन्य रोग पनि देखा पर्न सक्छ,’ डा. पुनले भने ।
– सर्पदंशको टोकाइबाट जोगिन रातमा हिँड्दा टर्चलाइटको प्रयोग गर्ने ।
आपत्कालीन तथा विपद्व्यवस्थापन एकाइ